ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्ता युवतिहरू हुन्छन् निकै नै भाग्यशाली । जानिराख्नुहोस् - Nepal Insider
‘विदेश गएर दिदीले जग्गा किन्नुभो, गोल्ड मेडलको पैसा थपेर म घर बनाउँछु’
Home/समाचार/ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्ता युवतिहरू हुन्छन् निकै नै भाग्यशाली । जानिराख्नुहोस्
एजेन्सीः चर्चित बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तकी छोरी त्रिशाला दत्त को प्रेमी को अचानक मृत्यु भएको छ ! छोरी त्रिसाला ले भावुक हुँदै एक स्टाटस लेखेकी छिन ! त्रिसाला का प्रेमीको इटालियन मा मृत्यु भएको हो ! त्रिसाला प्रेमी को मृत्यु भएपछि उनी शोक मा डुबेकी छिन ! प्रेमी को मृत्युभएपछी भावुक हुँदै उनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मा एक स्टाटस राख्दै एकदमै भावुक भएकी छिन !मृत्यु पछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसः “मेरो मुटु तोडिएको छ । मलाइ धेरै धेरै माया ,सुरक्षा र मेरो हेरचाह गरेकोमा धेरै धरै धन्यवाद । तिमीले मेरो जीवनमा यति धेरै खुसी ल्यायौँ म त्यति खुसी कहिल्यै भएकी थिइन । तिमीसँग भेट भएपछि म संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी केटी मानेकी थिए । तिमी सधैँ मेरो मन ,मुटु भित्र जीवितै रहन्छौ। म तिमीलाई सधैँ माया गर्छु । म सधैँ तिमीलाई सम्झिरहने छु ।’ जबसम्म म तिमीलाई अर्को पल्ट भेट्दिन ।”
डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्- जन्मदिन मनाउने केकसँगै काटिँदैछ हाम्रो धर्म संस्कृति
काभ्रेको फेदीमा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले घर पुरिँदा चार वर्षीय सजन लामाको मृ*त्यु !
चर्चित रेसलर जोन सिनाले शिल्पा शेट्टीको फोटो फोटो पोस्ट गरेपछि सबैजना जिल खाए, आखिर किन यस्तो गरे ?